"Towerlọ Elu Ọchịchịrị." Egwu, akụkọ sayensị na akụkọ ifo site n'aka Stephen King. | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Towerlọ Elu Ọchịchịrị. Egwu, akụkọ sayensị na akụkọ ifo site n'aka Stephen King.
Nwoke ojii ahụ na-agba ọsọ n'ọzara, onye na-agba égbè na-esokwa ya.
Site na nkebi ahịrịokwu abụọ dị ike ọ na-amalite Towerlọ Elu Ọchịchịrị, saga nke Stephen Stephen na onye ode akwukwo n’onwe ya lebara anya ya masterpiece. Onye edemede Maine, nke a kacha mara amara maka akwụkwọ akụkọ egwu It, Carrie, ma ọ bụ Ihe omimi nke Salem, na - aghọ ihe omumu edemede nke di egwu Towerlọ Elu Ọchịchịrị (ma na mpịakọta, ihe dị ka peeji 4.500 na mkpokọta, na ebumnuche nka) ihe niile ọ na-eme, mmetụta ya, na ọchịchọ ya.
Ma gịnị bụ ihe ahụ Towerlọ Elu Ọchịchịrị? Fọdụ ga-asị na ha bụ ihe egwuregwu nke onye na-achị ehi si ụwa ọzọ. Ndị ọzọ, nke bụ mbipute nke Onyenwe nke mgbaaka nke Eze. A ga-enwekwa ndị na-ekwu na ọ bụ ụdị mmegharị ahụ mmegharị. Na eziokwu bụ na ha niile na-ezighị ezi na n'otu oge na ha ziri ezi.
1 Ọnwụ na ara na-echere n'ụzọ ndị egbe egbe
2 Epic nke oge a
3 Roadszọ niile na-eduga na Towerlọ Elu
Ọnwụ na ara na-echere n'ụzọ ndị egbe egbe
Eziokwu prosaic nke ịdị adị nke eluigwe na ala na-akụda ndị pragmatist na ihunanya n'onwe ya.
Towerlọ Elu Ọchịchịrị bụ usoro akwụkwọ asatọ na-etinye anyị na akpụkpọ ụkwụ nke Roland Deschain nke Gilead, nke usoro ọmụmụ nke Eze Arthur (a na-atụ aro ya na ọ bụrụ na Exversibur nchara, ya na ndị nnupụisi ya, nke nwere ikike anwansi). Roland bụ onye ikpeazụ lanarịrị usoro chivalric oge ochie, na ụwa nwere klaasị klaasị nke Middle Ages, mana na teknụzụ nke etiti narị afọ XNUMX. O doro anya nke oma ma Middle World, dị ka a na-akpọ ya, bụ akụkụ nke akụkụ yiri nke ahụ, nke oge gara aga anyị, ma ọ bụ nke ọdịnihu dị egwu ebe mmepeanya dara mgbe agha atọm gachara.
N'oge agha agha ya, dike ga-agagharị n'okirikiri ala (nke dị ka ihe si na ihe nkiri American West ochie) ịchọta nwoke no na oji, onye dibia ojoo di omimi nke bibiri ndu ya na ndi nile o huru n'anya, ka o na-ele uwa anya na agba ya gburugburu. Otú ọ dị, ezigbo ihe mgbaru ọsọ Roland abụghị nwoke no na oji, ma iji nweta ụlọ elu gbara ọchịchịrị, njikọ ebe eluigwe na ala niile nwere ike ịgbakọta. Na iji mezuo ebumnuche a, ọ ga-achụrụ ihe niile na onye ọ bụla ọ hụrụ na ụzọ ya.
Adighi m atu aka m; onye ji aka ya tugharia iru nna-ya. Ana m egosi anya.
Anaghị m eji aka m agbapụ; onye ji aka ya echezọ nchefu nna ya. Ana m agbapụ na uche.
Anaghị m eji égbè egbu; onye ji ogbugbu egbu mmadu echezola iru nna ya. Ana m eji obi m egbu
Ọchịchọ a na-achọ landlọ Elu site na Roland bụ ihe dị egwu dị egwu dịka ọ bụ njem atụ na mmụọ. Nkọwa nke thelọ Elu ahụ, nnukwu ụlọ ojii nke na-ebili na-enweghị njedebe, ma gbaa ya gburugburu Enweghị ike-Ka No Rey, ubi nke Roses ebe ifuru ọ bụla na-anọchi anya otu n'ime ihe ndị ga-ekwe omume nke ọtụtụ mmadụ, bụ ọhụụ nke ịma mma uri na-agbawa obi.
Mbido nke Onye ji egbe, olu nke mbụ Towerlọ Elu Ọchịchịrị.
Epic nke oge a
Okwu kachasị mma iji kọwaa akwụkwọ nke Towerlọ Elu Ọchịchịrị ga-adị eclectic. Stephen King sitere n'ike mmụọ nsọ dịgasị iche iche iji mepụta ha. N’otu aka, etolite akụkọ a na-amụ ya site n’abụ a Childe Roland na Dark Tower rutere de Robert Browning kwuru (1812-1889). N'aka nke ọzọ, ọdịdị ọdịdị nke ọchụchọ ahụ, na ịdị adị nke otu ndị na-eso onye protagonist ahụ, drinkụọ ihe ọ directlyụ directlyụ ozugbo akụkọ ifo tolkien na Arthurian okirikiri. Na mgbakwunye, agwa Roland bụ ngosipụta doro anya nke ịkọwapụta Clint Eastwood en odida-anyanwu dị ka Ndị Ọma, Ndị Ọjọọ na Ndị Ọjọọ.
na saga akwụkwọ n'usoro oge dị ka ndị a:
Onye ji egbe (1982)
Ọbịbịa nke atọ (1987)
Ndị Badlands (1991)
Anwansi na Crystal (1997)
Ifufe site na mkpọchi (2012)
Calla Anụ Ọhịa Wolf (2003)
Abụ nke Susannah (2004)
Towerlọ Elu Ọchịchịrị (2004)
Towerlọ Elu Ọchịchịrị emeela ka ọtụtụ ndị nwee mmụọ nsọ ọrụ nrụpụtadị ka ntochi, egwuregwu vidio, a ihe nkiri nkiri, na abụ dịka Ebe ozo kariri nke otu Onye nlekọta kpuru ìsì, nke na-akọghachi ihe omimi nke Roland n'oge oké ọchịchọ ya maka esslọ Elu ahụ.
Roadszọ niile na-eduga na Towerlọ Elu
Roland mụrụ anya ma gee ntị n'olu nke abalị ka ikuku na-ehichapụ anya mmiri anya ya.
Ubi ikpe? Nzọpụta? Lọ elu.
Ọ ga-abata na Towerlọ Elu Ọchịchịrị ma ebe ahụ ka ọ ga-abụ aha ha.
Nke kacha adọrọ mmasị nkọwa nke Towerlọ Elu Ọchịchịrị bụ nke ahụ metụtara akwụkwọ niile ọzọ nke Eze. Ihe odide, ọnọdụ, na ntụaka maka ọrụ dị iche iche Mili na-acha akwụkwọ ndụ, Ihe na-egbukepụ egbukepụ o Alụlụụ. Site n'ikike dị otú ahụ na n'ikpeazụ akụkọ ndị a ejikọtara ọnụ, ọbụnadị onye edemede n'onwe ya pụtara n'otu n'ime mpịakọta dịka otu agwa.
Na nkenke, ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịgụ ihe dị iche na nke ọhụrụ, ana m akwado ya Towerlọ Elu Ọchịchịrị. O nwere ike oge ụfọdụ nwee mgbago na ala (ihe nghọta na-atụle nha ya), mana n'ozuzu ọ bụ ahụmịhe na ahụmịhe mbụ dịka mmadụ ole na ole.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Novela » Towerlọ Elu Ọchịchịrị. Egwu, akụkọ sayensị na akụkọ ifo site n'aka Stephen King.
Afọ jubile nke Teresia. 5 poems nke Teresa de Jesús na ụbọchị ọmụmụ ya